ॐ लेखेर पूरा भिडियो हेर्नुहोस ! विशेष लाभ मिल्नेछ – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/ॐ लेखेर पूरा भिडियो हेर्नुहोस ! विशेष लाभ मिल्नेछ
ॐ लेखेर पूरा भिडियो हेर्नुहोस ! विशेष लाभ मिल्नेछ
ॐ लेखेर पूरा भिडियो हेर्नुहोस !
भिडियो अन्तिम मा छ हेर्नुहोला !
भगवान शिवको दर्शन गरि भोलि भदौ १५ गते सोमबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल!
कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारीसँग महत्वपूर्ण छलफल हुनेछ। सरकारी क्षेत्रबाट लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। कारणवश यात्राको योग बन्ने देखिन्छ। कार्यभार बढ्नेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। आमाबाट लाभ मिल्नसक्छ।
नयाँ कार्य यस दिन प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। धार्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ। लामो यात्राको योग बन्नेछ। टाढा रहेका आफन्तजनबाट शुभ समाचार मिल्ने सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्य सामान्य रहनेछ। आर्थिक लाभ मिले योग छ।
नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन उत्तम छैन। क्रोध तथा वाणीमा संयम राख्नुहोला। अधिक खर्च हुँदा आर्थिक पक्ष कमजोर रहन सक्छ। कान-पानमा विशेष धान राख्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा समय अनुकूल नरहन सक्छ।
मनोरन्जन क्षेत्रमा अधिक खर्च हुनेछ। विपरित लिंगी प्रति आकर्षण बढ्नेछ। स्वादिष्ट एवम उत्तम भोजनका साथै वाहन सुखको प्राप्ति हुनेछ। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ्नेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। व्यापारमा विशेष लाभ मिल्नेछ।
घरमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। दैनिक कार्यमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला। शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव गर्नुहुनेछ। अपेक्षा अनुसार सफलता नमिल्न सक्छ। मनमा उदासिनता छाउनेछ। शत्रुसँग सावधान रहनुहोला।
प्रिय व्यक्तिसँगको भेटले मन प्रशन्न रहला। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। सन्तान सम्बन्धि विषयले मन चिन्तित रहला। विद्यार्थी वर्गको लागि समय उत्तम छैन। आकस्मिक धन खर्च हुने सम्भावना छ।
शारीरिक थकान तथा मानसिक तनाब महशुस हुनेछ। आमा तथा स्त्री मित्रको कुराले मन चिन्तित रहन सक्छ। यात्रा गर्नको लागि दिन प्रतिकूल रहेको छ। परिवारमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। घर-जग्गा कारोबारको लागि समय उत्तम छैन।
नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि समय शुभ रहेको छ। साथी-भाईबाट सहयोग मिल्नेछ। आर्थिक लाभ तथा भाग्य वृद्धिको योग रहेको छ। यात्राको योग बन्नेछ। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्। कार्यक्षेत्रमा सजिलै सफलता मिल्नेछ।
अनावश्यक खर्च बढ्नेछ। मनमा ग्लानिको भावना रहनेछ। परिवारका सदस्यसँग मनमुटाव हुनसक्छ। अपेक्षा अनुसार कार्य सफलता नमिल्दा मन चिन्तित रहला। कार्यभार बढ्नेछ। नयाँ कार्य गर्नको लागि समय उत्तम रहेको छ।
हरेक कार्य सरलताका साथ पूरा हुनेछ। कार्यक्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठा बढ्नेछ। पदोन्नतीको योग रहेको छ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। मित्रगणसँग भेट गर्ने अवसर मिल्नेछ।
स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान राख्न जरूरी देखिन्छ। वाणी तथा क्रोधमा संयम राख्नुहोला। धनहानिको सम्भावना छ। परिवारमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। पुँजी निवेश गर्नु अघि विशेष सोच-बिचार गर्नुहोला।
मित्रगणसँग भेटघाट गर्ने अवसर मिल्नेछ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ। रमणीय स्थानमा यात्राको योग बन्नेछ। हरेक क्षेत्रमा लाभ मिल्दा मन प्रशन्न रहनेछ। जीवनसाथीसँगको सम्बन्धमा सुमधुरता छाउनेछ। सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ।
स्कुलमा हाजिर गरेर दिउँसभर झण्डा बोकेर गाउँ डुल्छिन प्रधानाध्यापक ! स्थानीयहरूले गरे बिरोध